2K20 မှာ iPhone XR ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? ဘယ်နေရာ မှာလဲ? -
2K20 မှာ iPhone XR ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? ဘယ်နေရာ မှာလဲ?
Who is iPhone XR?
Why is iPhone XR?
Okay 👌 ပါ iUsers တို့ခင်ဗျာ၊ iPhone XR အကြောင်းကို စပြောရရင် XR က ဘူလဲ? XR ဆိုတာ iPhone X ရဲ့ R version ပါပဲ။ 2017 မှာ iPhone X ထွက်လာတယ်၊ 2018 ကြတော့ iPhone X ရဲ့ R & S Version တွေ ဆက်လက် ပြီး ထွက်ရှိလာ ခဲ့တယ်။ တကယ်လို့များ iPhone XS ရဲ့ “S”က iPhone X ရဲ့ Speed Version လို့ ကိုယ်စားပြုရင် iPhone XR ရဲ့ “R” က Rare ဆိုတယ့် စကားလုံးကို ကိုယ်စားပြု မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်တယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်ကို Sport cars တွေ စိတ်ဝင်စား တယ့်သူ တွေ နားလည် ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
Apple က 2018 ရဲ့ iPhone naming စနစ်ကို Sport car တွေနောက် လိုက်ပေးခဲ့ တယ်လို့ ထင်မိတယ်၊ R တို့ S တို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ရင်းနှီးနေကြ ကားပြိုင်ဂိမ်း တွေထဲမှာ အမြဲတွေ့နေကြ စကားလုံးတွေ ပဲလေ။
ကဲထားပါတော့၊ iPhone XR က iPhone X ထက်ပိုပြီး more advance ဖြစ်တယ့် Version ဆိုတာ သံသရ ရှိစရာ မလိုတယ့် အချက်ပါ။ သူ့မှာ LCD ပဲ သုံးထားတာ ကတော့ weakness ပေါ့။ Camera လည်း တစ်လုံးပဲ ဆိုပေမယ့် အပြင်မှာ ယှဉ် ကိုင်ကြည့် သလောက်တော့ iPhone XR ရဲ့ camera ကိုပဲ prefer ဖြစ်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံး သူ့မှာ ပိုသာတယ့် A12 Bionic Chip ရှိတယ်၊ ပိုကောင်းတယ့် battery life ရှိတယ်။
ဘာလို့ iPhone XR အကြောင်းကို ပြောဖို့ အချိန်ကျ လာရတာလဲ? အဖြေက အရှင်းကြီးပါ၊ iPhone SE ထွက်လာတယ်၊ အပြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ကြည့် စရာ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးက iPhone XR ပါပဲ။ ဘာကြောင့် iPhone XR က ယှဉ်ကြည့်ဖို့ ပျော်ဖို့ ကောင်းတာလဲ ဆိုရင် (၄) ခုမြောက် ဆောင်းပါးမှာ ဆက်လက် ဖော်ပြ ပေးသွားပါမယ်။
မမေ့ပါနဲ့ သူ့အချိန် အခါတုန်းက ဆိုရင် iPhone XR က တကယ့်ကို ဆရာကြီး တစ်ပါး ဖြစ်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ အခုချိန်မှာ iPhone XR ရဲ့ 64,128,256GB second hand အသန့်တွေဟာ iPhone SE ရဲ့ 64,128,256GB တွေနဲ့ သွား ညီနေတယ်။ ဒီအချက် Price option နဲ့တင် တော်တော် ယှဉ်ဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။
2019 April လရဲ့ Global top ten iOS Devices ထဲမှာ iPhone XR က မြင်ရတယ့် အတိုင်း Rank7မှာ ရပ်တည် ခဲ့တယ်။ iPhone X ရဲ့ Performance နဲ့ ယှဉ်ကြည့် နိုင်တယ်၊ တစ်ခုတော့ သိထားပါ ဒီ ဇယားကို ဇယားလိုပဲ ကြည့်ပါ တကယ်သုံးတယ့် Real time performance မှာကြ သိပ် အရမ်း မကွာခြား နိုင်ပါဖူး၊ scores တွေ လိုက်နုတ်ကြည့် ပြီး ဇယား မရှုပ်နဲ့ ပေါ့နော်။
ပြီးတော့ iPhone XR ရဲ့ Face ID က X ထက်တော့ ပိုကောင်းတာ သေချာတယ် Feedbacks တွေ ကြည့်ပြီး အတတ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ Face ID ဆိုတာကလည်း Touch ID ထက် သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင် အားသာချက်တွေ လုပ်နိုင်တယ့် ability လေးတွေ ရှိနေသေးတယ် ပေါ့နော်။ အဆုံသတ်ပြော ရရင် iPhone XR မှာ iPhone 11 Pro Max နဲ့ပင် တူညီတယ့် True Tone, Wide color gamut & 120Hz touch-sensing တွေတောင် မှပဲ ပါလိုက် သေးတယ်။
⁃ တကယ်ပြောရရင် iPhone XR ဆိုတာ 2k20 မှာ သက်သက် သာသာ နဲ့ Overall ratings ကောင်းတယ့် iPhone ရှာနေရင် လက်မလွှတ် သင့်တယ့် iPhone တစ်လုံးပါ
iPhone XR ရဲ့ specifications တွေ ဖတ်ကြည့် ခြင်ရင် ဒီ Link ကို နှိပ်ဖတ်ပါ။
Previous iPhone SE 2020 ကို တရုတ်တွင် လူကြိုက်နည်းနေ
Next ပျင်းနေပါ သလား? ဒီ ဂီမ်းလေးတွေ က သင့်ကို စိတ်ကျေနပ် စေပါလိမ့်မယ်။